न्युकोनका ट्रान्सफर्मरप्रति उपभोक्ताको विश्वास बढ्दै छ
- गोल्छा अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको अरिहन्त कमर्सियल प्रालिले ट्रान्सफर्मरसहित के–कस्ता विद्युतीय उपकरणको बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ ?
गोल्छा अर्गनाइजेसन सन् १९३४ मै स्थापना भएको हो । यसले हाल नेपालमा ट्रेडिङ, म्यानुफ्याक्चरिङदेखि हरेकजसो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । यही कम्पनीको छाताअन्तर्गत अरिहन्त कमर्सियल प्रालि सामी ब्रान्डको ट्याक्टर, लुदियानामा रहेको कम्पनी क्रिस्टलका विद्युतीय उपकरण र न्युकनका ट्रान्सफर्मरको नेपाली आधिकारिक वितरक हो ।
सन् १९६० मै स्थापना भएको पुरानो तथा विश्वासिलो कम्पनी क्रिस्टल स्वीच गियरका एमसिबी, १५ देखि ८०० एम्पिएरसम्का एमसिसिबी, एलइडी लाइट, डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड, जिआई बक्स, ४० देखि ३१५० एम्पियरसम्मका चेन्जेबर स्विचजस्ता उपकरणहरू बिक्री–विरतण गर्दै आएका छौँ ।
गोल्छा अर्गनाइजेसनप्रति आम नेपाली उपभोक्ताको विश्वास छ । त्यही विश्वासको सम्मान गर्दै हामीले विश्वासिलो कम्पनीको गुणस्तरीय उत्पादन नेपालमा ल्याएका हौँ ।
- न्युकोनको ट्रान्सफर्मरचाहिँ कहिलेबाट नेपाल भित्र्याउनुभएको हो ?
हालै हामीले न्युकोन ट्रान्सफर्मरको समेत बिक्री–वितरण थालेका छौँ । यो लुदियानामा रहेको कम्पनी हो । लुदियाना र राजस्थानको भिवाडी भन्ने ठाउँ गरी दुई ठाउँमा यसको डिस्ट्रिब्युसन प्लान्ट रहेको छ ।
२५ केभिएदेखि ८० एमभिएसम्मका डिस्ट्रिब्युसन तथा पावर ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्छ । नेपालबाहेक विश्वका ३० देशमा न्युकोनका ट्रान्सफर्मर बिक्री भइरहेका छन् । हामीले नेपालमा एक वर्षअघि यो ब्रान्डको ट्रान्सफर्मर ल्याएका हौँ ।
- एक वर्षको अवधिमा न्युकोनको ट्रान्सफर्मरको बिक्री–वितरण कस्तो रह्यो । बजारको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
ट्रान्सफर्मर संवेदनशील वस्तु हो । आफूले प्रयोग गरिरहेको स्थानीय ब्रान्डका ट्रान्सफर्मरप्रति उपभोक्ताको विश्वास भइसकेको हुन्छ । नयाँ उत्पादन पनि गुणस्तरीय छ भने त्यसले बजारको विश्वास नजित्ला भन्ने हुँदैन । नेपालमा कुनै पनि ट्रान्सफर्मर ल्याउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हेटौँडास्थित केन्द्रीय वर्कसपमा परीक्षण गरिन्छ ।
त्यो परीक्षण गर्दा न्युकोनको ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणको तोकेको मापदण्डभन्दा राम्रो देखिएको छ । त्यही नतिजाका आधारमा हाम्रो ट्रान्सफर्मरको विक्रिवितरण बढेको छ । सुरुमा भोजपुरको ट्याम्केमैयुङ गाउँपालिका २३ वटा ट्रान्सफर्मर दियौँ ।
त्यसबाहेक पोखरा, नेपालगन्जमा हाम्रो ट्रान्सफर्मर प्रयोग भएको छ । रतुवामाई, धनगढीजस्ता नगरपालिकाले बल्कमा लाने कुरा भइरहेको छ । ट्रान्सफर्मर खरिदका लागि विद्युत् प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रमा पनि न्युकोनले भाग लिँदै छ । उपभोक्ताको प्रतिक्रिया पनि राम्रो पाएका छौँ ।
- नेपालका अन्य स्थानीय ब्रान्ड र विदेशबाट आउने ट्रान्सफर्मरसँग प्रतिस्पर्धाका लागि न्युकोन सक्षम छ ?
निजी उपभोक्ताको बजारमा हामीले प्रतिस्पर्धामा उत्रन गाह्रो छैन । गुणस्तर र मूल्यका आधारमा निजी उपभोक्ताले न्युकोनको ट्रान्सफर्मर सजिलै प्रयोग गर्छन् । हामी कपर भएर आल्मुनियमको ट्रान्सफर्मर बेच्दैनौँ । जे छ त्यही भन्छौँ र गुणस्तरीय नै दिन्छौँ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा सरकारी स्तरमा हुने खरिदमा हाम्रो ट्रान्सफर्मरले कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा १५ प्रतिशत महँगो परे पनि नेपाली उत्पादन नै लिनुपर्ने खरिद ऐनको व्यवस्था गलत छ । यस्तो व्यवस्थाले सस्तैमा गुणस्तरीय ट्रान्सफर्मर प्रयोग गर्न पाउने नेपाली उपभोक्ताको अधिकार खुम्च्याएको छ । यसलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ ।
अर्को कुरा नेपाली ट्रान्सफर्मरको पनि ग्रेडिङ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बाँकी, ‘आफ्टर सेल्स सर्भिस’, गुणस्तर, वारेन्टीजस्ता कुरामा हामी कमजोर छैनौँ । प्राविधिक र औजारसहितको मोबाइल सर्भिस पनि सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ ।
- नेपाली बजारमा ट्रान्सफर्मरको माग अझ बढ्ने देखिन्छ । न्युकोनको उत्पादन प्लान नेपालमै लगाउनेबारे सोचिएको छ ?
हो, हामी पनि त्यही सोचमा छौँ । लोडसेडिङको अन्त्य, नेपाली विद्युत्का लागि खुलेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सम्भावना, नेपाल आफैँले बढाउनुपर्ने आन्तरिक खपतजस्ता कुरालाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा अब ट्रान्सफर्मरको माग बढ्छ ।
त्यसो हुँदा न्युकोनको म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट नेपालमै लगाउने सोच पनि छ । यसबारे उत्पादक कम्पनीसँग कुरा पनि भएको छ । र, प्रयोग गर्दै विश्वास गर्दै उपभोक्ताले हाम्रो बजार स्थापित गर्न सघाउनु हुने विश्वास हामीलाई छ ।
विजयकुमार रे अरिहन्त कमर्सियल प्रालि (गोल्छा अर्गनाइजेसन)का जनरल म्यानेजर हुन् ।